Galaxy ဖုန်းတွေအတွက် Samsung ရဲ့ One UI အသစ်
8 Nov 2018 . 12:16 PM
ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် အရေးအကြီးဆုံးကတော့ User Experience ပါပဲ။ အဲ့ဒီအတွက် Samsung ကတော့ သူတို့ရဲ့ နောက်ထပ် Galaxy တွေအတွက် Software ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်လဲမှုတွေကို Samsung Developer Conference 2018 မှာ ထုတ်ပြပေးလိုက်ပါပြီ။
Samsung ရဲ့ Galaxy ဖုန်းတွေပေါ်မှာသုံးပေးထားတဲ့ User Interface တွေက တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပြောင်းလဲလာတာ အခုဆိုရင် One UI ဆိုပြီး အသစ်ထပ်မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ အရင်ကတော့ Samsung ရဲ့ Touch Wiz နဲ့ Samsung User Experience ဆိုတွေရှိခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ အဲ့ဒီ ၂ ခုက အတိတ်မှာ ကျန်ခဲ့ပါပြီ။ Samsung က ပိုပြီးရိုးရှင်းတဲ့ UI အသစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီး User တွေရဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေကို ဖြေရှင်းပေးထားတယ်လို့ ကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်။
2 Areas on One Screen
Samsung ဖုန်းတွေမှာ သိသာတဲ့ပြောင်းလဲမှုကို စတင်ခဲ့တာ Galaxy S8 နဲ့ပါ။ Samsung ရဲ့ Infinity Display တွေကြောင့် ဖုန်းတွေက ပိုပြီးရှည်လာခဲ့တာကြောင့် Display ပေါ်မှာ Content တွေကို အများကြီးပိုပြလာနိုင်လို့ Scrolling လုပ်ဖို့ သက်သာလာခဲ့ပါတယ်။ Video တွေကို Widescreen ပေါ်မှာ ကြည့်နေရသလိုခံစားနိုင်လာတယ်၊ စာဖတ်လို့ပိုကောင်းလာတဲ့အပြင် ဖုန်းတွေရဲ့အရွယ်အစားတွေကလည်း Display ကြီးပေးမယ့် သယ်သွားလို့ လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာ ထိန်းပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆင်မပြေတဲ့အချက်တွေက ကျန်နေပါသေးတယ်။
One Handed Experience
Display တွေရှည်လာတဲ့အခါ လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ ကိုင်သုံးတိုင်း အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အချိန်တွေက ပိုများလာပါတယ်။ လက်တစ်ဖက်တည်း ကိုင်ထားတဲ့အခါ လက်မတစ်ချောင်းနဲ့ ရောက်နိုင်တဲ့နေရာက Screen ရဲ့ ၃ ပုံ ၂ ပုံလောက်ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Samsung ရဲ့ One UI အသစ်က ဖြေရှင်းပေးလိုက်ပါပြီ။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးလိုက်သလဲဆိုတော့ ဖုန်း Screen ရဲ့ အပေါ်ဖက် တစ်ဝက်ကို User Interact လုပ်လို့ရမယ့် Item တွေ ထားမပေးတော့ဘဲ လက်မနဲ့ရောက်နိုင်မယ့် Display အလည်လောက်မှာပဲ ခလုတ်တွေ၊ Menu တွေနဲ့ App ထဲက Item တွေကို ထားပေးတော့မှာပါ။
အဲ့ဒီအပြင် Dark User Interface ကိုလည်း ထည့်ပေးလာမှာဖြစ်ပြီး မလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကို အမြင်ပိုင်းမှာ ပိုရှင်းသွားအောင်လုပ်ပေးထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
System ပိုင်းမှာလည်း Icon တွေကို အရင်ကထင် ကပိုရှင်းအောင် လုပ်ပေးထားလို့ အမြင်ပိုင်းမှာတော့ သိသိသာသာပိုကြည့်ကောင်းလာမှာပါ။ Multitasking ပိုင်းနဲ့ Performance ပိုင်းမှာတော့ ဘယ်လောက်ပိုကောင်းလာမလဲဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ။ သင်ရော Samsung Fan တစ်ယောက်လား။
Ref: Samsung | Android Central | The Verge
Galaxy ဖုနျးတှအေတှကျ Samsung ရဲ့ One UI အသဈ
ဖုနျးတဈလုံးအတှကျ အရေးအကွီးဆုံးကတော့ User Experience ပါပဲ။ အဲ့ဒီအတှကျ Samsung ကတော့ သူတို့ရဲ့ နောကျထပျ Galaxy တှအေတှကျ Software ပိုငျးဆိုငျရာ ပွောငျလဲမှုတှကေို Samsung Developer Conference 2018 မှာ ထုတျပွပေးလိုကျပါပွီ။
Samsung ရဲ့ Galaxy ဖုနျးတှပေျေါမှာသုံးပေးထားတဲ့ User Interface တှကေ တဈနှဈပွီးတဈနှဈပွောငျးလဲလာတာ အခုဆိုရငျ One UI ဆိုပွီး အသဈထပျမိတျဆကျလိုကျပါပွီ။ အရငျကတော့ Samsung ရဲ့ Touch Wiz နဲ့ Samsung User Experience ဆိုတှရှေိခဲ့ပမေယျ့ အခုတော့ အဲ့ဒီ ၂ ခုက အတိတျမှာ ကနျြခဲ့ပါပွီ။ Samsung က ပိုပွီးရိုးရှငျးတဲ့ UI အသဈကို မိတျဆကျပေးလိုကျပွီး User တှရေဲ့ အဆငျမပွမှေုတှကေို ဖွရှေငျးပေးထားတယျလို့ ကွညောသှားခဲ့ပါတယျ။
Samsung ဖုနျးတှမှော သိသာတဲ့ပွောငျးလဲမှုကို စတငျခဲ့တာ Galaxy S8 နဲ့ပါ။ Samsung ရဲ့ Infinity Display တှကွေောငျ့ ဖုနျးတှကေ ပိုပွီးရှညျလာခဲ့တာကွောငျ့ Display ပျေါမှာ Content တှကေို အမြားကွီးပိုပွလာနိုငျလို့ Scrolling လုပျဖို့ သကျသာလာခဲ့ပါတယျ။ Video တှကေို Widescreen ပျေါမှာ ကွညျ့နရေသလိုခံစားနိုငျလာတယျ၊ စာဖတျလို့ပိုကောငျးလာတဲ့အပွငျ ဖုနျးတှရေဲ့အရှယျအစားတှကေလညျး Display ကွီးပေးမယျ့ သယျသှားလို့ လှယျကူတဲ့အခွအေနတေဈခုမှာ ထိနျးပေးထားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဆငျမပွတေဲ့အခကျြတှကေ ကနျြနပေါသေးတယျ။
Display တှရှေညျလာတဲ့အခါ လကျတဈဖကျတညျးနဲ့ ကိုငျသုံးတိုငျး အဆငျမပွဖွေဈတဲ့အခြိနျတှကေ ပိုမြားလာပါတယျ။ လကျတဈဖကျတညျး ကိုငျထားတဲ့အခါ လကျမတဈခြောငျးနဲ့ ရောကျနိုငျတဲ့နရောက Screen ရဲ့ ၃ ပုံ ၂ ပုံလောကျပဲ ကနျြပါတော့တယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ Samsung ရဲ့ One UI အသဈက ဖွရှေငျးပေးလိုကျပါပွီ။ ဘယျလိုဖွရှေငျးပေးလိုကျသလဲဆိုတော့ ဖုနျး Screen ရဲ့ အပျေါဖကျ တဈဝကျကို User Interact လုပျလို့ရမယျ့ Item တှေ ထားမပေးတော့ဘဲ လကျမနဲ့ရောကျနိုငျမယျ့ Display အလညျလောကျမှာပဲ ခလုတျတှေ၊ Menu တှနေဲ့ App ထဲက Item တှကေို ထားပေးတော့မှာပါ။
အဲ့ဒီအပွငျ Dark User Interface ကိုလညျး ထညျ့ပေးလာမှာဖွဈပွီး မလိုအပျတဲ့နရောတှကေို အမွငျပိုငျးမှာ ပိုရှငျးသှားအောငျလုပျပေးထားတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။
System ပိုငျးမှာလညျး Icon တှကေို အရငျကထငျ ကပိုရှငျးအောငျ လုပျပေးထားလို့ အမွငျပိုငျးမှာတော့ သိသိသာသာပိုကွညျ့ကောငျးလာမှာပါ။ Multitasking ပိုငျးနဲ့ Performance ပိုငျးမှာတော့ ဘယျလောကျပိုကောငျးလာမလဲဆိုတာကတော့ စောငျ့ကွညျ့ရဦးမှာပါ။ သငျရော Samsung Fan တဈယောကျလား။
by 2B . 23 mins ago